सुनसान पोखराको बाराही घाट ! – NepalDailyPost
नेपाल डेली पोस्ट २०७६, ४ चैत्र मंगलवार १७:२५
सुनसान पोखराको बाराही घाट !
पोखरा, ४ चैत – पर्यटकीय नगरी पोखराको बाराही घाटमा पर्यटकको पर्खाइमा डुङ्गा । विश्वका विभिन्न मुलुकमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण पर्यटकको आवागमन रोकिएपछि यहाँका पर्यटकीयस्थल सुनसान बनेका छन् । तस्वीर – वासुदेव पौडेल
PREVIOUS Previous post: कोरोना भाइरस – ७२ घण्टा भित्र १० आईसीयूसहित ७० शैया सञ्चालन हुँदै
NEXT Next post: भृकुुटीमण्डपमा ढकमक्क फूलेको चेरीको फूल !